Ny Torolàlana Farany Ho An'ny Clomid mba hitondrany ny tsy fahampian'ny vehivavy
Ny zava-drehetra momba ny Clomid
1. Inona no atao hoe Clomid? Ahoana no iasany? 2. Clomid Uses
3. Clomid dosage 4. Vokatra amin'ny Clomid
7. Clomid tombontsoa 8. Clomid reviews
9. Clomid for sale 10. Clomid amin'ny fikarakarana tsy fahampiana amin'ny vehivavy - (Famintinana)
Inona no atao hoe Clomid? Ahoana no iasany?
Clomiphene citrate koa nantsoina Clomid (50-41-9), dia fanafody am-bava izay ampiasaina amin'ny fikarakarana ny karazana zaza tsy manam-paharoa manokana. Amin'ny ankapobeny dia itambaran'ireo marika samihafa toy ny Clomidac, Clomene, Bemot, Clomi, clomifen, Beclom, Blesifen, Biogen, Blesifen, Chloramiphene, ClomHEXAL, et al. Ny fampiasana azy dia nankatoavina ary nomena ny fampiasana ara-pahasalamana ao 1967 any Etazonia. Ny rafi-pahasalamana rehetra dia mila io fitsaboana azo antoka sy mahomby io araka ny lisitry ny Medicines fototra ao amin'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana. Izy io dia hita amin'ny fanafody goavana. Clomid dia anisan'ireo fanafody fanodinana gripa maromaro ao amin'ny vehivavy izay tsy mahazaka noho ny alima-ovulation sy ny fanovàna.
Ny fitsaboana dia miara-miasa amin'ny fomba izay mahatonga ny vatana hiheverana fa ambany ny estrogen ary mahatonga ny fihanaky ny pitipoitra hanatsara ny hormonina hormonina LH na follicle hendratra hormonina fantatra amin'ny hoe sekretera FSH. Ny haavon'ny elefant FSH dia manandratra ny ovaires mba hananana tsiranoka iray na maromaro izay hamokatra na hamokarana amin'ny ovulation. Etsy ankilany kosa, ny haavon'ny LH dia manandratra fako.
Clomid (50-41-9) dia fanafody tena tiana ho an'ireo tranainy tranainy nandritra ny dimampolo taona ho an'ireo dokotera mpanampy ara-pitsaboana na OB-GYNs manoratra matetika ny citrate clomiphene alohan'ny hanondroana ny iray na roa mba hijerena manampahaizana manokana momba ny fiterahana amin'ny fikarakarana manokana. Misy manam-pahaizana manokana miteraka clomiphene citrate ihany koa. Ity dokotera ity dia tsy voatery hodinihina ho an'ny vehivavy izay tsy misy atody tsy mamorona atody araka ny tokony ho izy.
Ny fitondram-panjakana tsy ara-pahasalamana, ny ra mandriaka, ny amenorrhea, ny sekoly ambaratonga faharoa, ny fanafody post-contraceptive, ny galactorrhoea, ny otrikaretin'ny oviana polycystika, ny aretin'i Chiari-Frommel, ny tsy fahasalaman'ny hormone sterozy, ny oligospermatism, ny fitsaboana ny fikorontanan'ny gonadotrophic opera ny doro endooro. Ny Citrate Clomiphene dia matetika mahasoa ho an'ireo izay manandrana manentana ny masoizan'ny Firenena Mikambana fa manana ny iray amin'ireto olana ireto:
Fihetsiketsehana tsy ara-dalàna: mahavariana ny hitady indray ny fiovan'ny toeram-piaramanidin'ny vehivavy iray noho izany tsy misy dikany izany fa tsy azony antoka raha vao manararaotra. Raha vao mahomby, ny fampiasana clomiphene citrate dia tokony hamolaka valim-bolo azo antoka amin'ny fahafahana hanao firaisana ara-dalàna na fandefasana entrainerina.
Ny "Male Factor" olana ara-pahasalamana: rehefa misy ny fifangaroana amin'ny hatsaran'ny vatan'ny olona, ​​dia matetika ny mpitsabo no afaka manolotra fanirian-tsinin'ny intrauterine mba hampitombo ny fisian'ny toe-batana. Ny citrate Clomiphene dia matetika no zatra hanamora ny fandaharam-potoana ara-nofo amin'ny fisainana miaraka amin'ny fihodinan'ny vehivavy.
Ny tsy fahasalamana tsy fantatra: ny citrate clomiphene dia naseho tamim-pahombiazana amin'ny fampitomboana ny tahan'ny fitondran-tena ara-pahasalamana ao amin'ny mpivady tanora marary izay nanana fandalinana tanteraka ny fiterahana, na izany aza dia mbola misy faritra mitoka-monina izay mahatsinjo bevohoka.
Tsy voatery atao ny manao fanadihadiana momba ny ultrasound mba hanaisotra tsikelikely ny fihanaky ny firaisana ara-nofo tsy tapaka talohan'ny isaky ny fitsaboana vaovao.
Ny Clomifene dia nampiasaina niaraka tamin'ny teknôlôjian'ny fitaovana ampiasaina amin'ny motera mba hanitarana ny tahan'ny fahombiazan'ireo fomba fanao samihafa ireo
Ny Clomifene dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana ny eunuchoidism ary ny iray hafa amin'ny fitsaboana hormonina androgenika fitsaboana.
Dosage form: pill NDC 0068-0226-30: tablets mg tablets in cartons of thirty
Tablets dia ao amin'ny singa sasantsasany, fotsy, fotsy, voafantina, ary debomised clomiphene citrate dimampolo.
Tehirizina tabilao amin'ny mari-pandaminana voafehy 59-86 ° F (15-30 ° C). Fiarovana amin'ny hafanana, hazavana, ary mando tafahoatra, ary mitahiry amin'ny fonosana misokatra.
Ny fiasana sy ny fitsaboana ireo kandidà ho an'ny fitsaboana Clomiphene citrate dia tokony hambenan'ny dokotera efa antitra eo amin'ny fitantanana ny fahasalamana ara-pahasalamana na ny aretin'ny endocrine. Ny marary dia tokony hofidiana ho an'ny fitsaboana amin'ny clomiphene citrate raha mitandrina tsara ny famakafakana. Ny fandaminana ny fitsaboana dia tokony havoaka mialoha. Ny tsy fahampiana amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny fitsaboana dia tokony hosoloina na tsy maintsy atao alohan'ny hanombohan'ny citrate clomiphene. Ny tanjona ara-pahasalamana dia tokony handanjalanja amin'ny loza mety hitranga ary voalaza amin'ny marary et al. miady saina amin'ny fiasa ara-batana.
Ny fitsaboana ny marary voafidy dia tokony hanomboka amin'ny doka kafe, dimampolo isan'andro isan'andro (takelaka 1) mandritra ny dimy andro. Ny dosage dia tokony ho tafahoatra ao anatin'ireo marary ireo fa ny sampan-draharahan'ny Firenena Mikambana dia tsy mamoaka ny valim-pandrindrana clomiphene. Ny habetsahan'ny kafe tsy voafetra na ny halavan'ny fitsaboana dia voatendry manokana raha toa ny olona voan'ny hormone hypophysis, toy ny marary marary amin'ny ovain'ny polycystika.
Ny marary dia tokony handinika amim-pikirizana amin'ny fanilihana ny toe-batana ara-batana, ny fampivoarana ny firaisana ara-nofo, na ny fitomboan'ny taova eo amin'ny fitsaboana rehetra.
Raha voan'ny fandehanan'ny ratra ny progestin, na raha mitranga alohan'ny fitsaboana ara-pahasalamana ny fiterahana amin'ny fiterahana ao anatiny, ny fandaharam-potoana dimy santimetatra isan'andro isan'andro mandritra ny dimy andro dia tokony ho atomboka na amin'ny andro fahadimy amin'io vanim-potoana io. Ny fitsaboana ara-pahasalamana dia azo atomboka amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ilay masoivohon'ny masoivohon'ny Firenena Mikambana fa tsy nisy ny fakana an-keriny ny taovam-pananahana ao anatiny. Raha vao mitranga ao anatin'io doka io ny organika, dia tsy misy tombony amin'ny fampitomboana ny doka amin'ny fahombiazan'ny fitsaboana.
Raha toa ka tsy toa ny fitsaboana ara-boajanahary no miseho voalohany rehefa mikarakara fitsaboana, ny dingana faharoa amin'ny zato isan'andro (takelaka roa miisa dimampolo dia nomena isan'andro isan'andro) tokony ho dimy andro. Ity fianarana ity dia afaka manomboka amin'ny fiandohan'ny telopolo andro raha vao misy fitandremana mialoha ny fisoratana anarana ho an'ny sembana. Ny fampitomboana ny doka na ny fotoana fitsaboana ara-pahasalamana eo an-tany lavitra zato heny / andro mandritra ny dimy andro dia tsy voatery hodinihina.
Ny ankamaroan'ny vondrona parlemanterain'ny Firenena Mikambana misahana ny fitsaboana dia afaka manao toy izany indray mandeha voalohany indrindra amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana. Raha toa ka tsy mandeha ny fitsaboana ara-pahasalamana telo ny organika, dia tsy voatsabo ny fitsaboana fanampiny amin'ny clomiphene citrate ary tokony hovaliana koa ny marary. Raha misy valim-bolo telo miseho, na dia tsy vita aza ny fiterahana, dia tsy voatsabo ny fitsaboana fanampiny.
Vokatra amin'ny Clomid
Satria ny siramamy clomiphene dia mitarika ny tsirin-tsakafo maro isan-karazany, ny fahafahanao mahazo maromaro (twins na triplets ... indraindray) dia niakatra. Ny fikarakarana miaraka amin'ny tompon'andraikitra matihanina manampahaizana momba ny fahavokarana manan-talenta dia manamaivana ny lanjan'ny lamina ambonimbony kokoa ny orinasan'ny Firenena Mikambana.
IVF dia teknika hafa iray amin'ny famerana ny isan'ny zaza ateraky ny fiterahana ho an'ny reny tsara indrindra / reny zaza.
Raha ny fanentanana ny fomba organika, ny clomiphene citrate dia mahagaga ny fandresena, mitarika ho amin'ny fanodikodinan'ny atody matihanina ao anatin'ny valo ambinifolo taonan'ny zazavavin'ny Firenena Mikambana mampiasa izany.
Boldenone Undecylenate (Equipoise) fampiasana, Cycle, Dosage, Famaranana, Enjehina(Misokatra amin'ny tranokala vaovao ianao)
Raha vao haingana ianao no manakana ny clomiphene citrate, dia misy fotoana mety hany manam-pahalalanao hitazona ny fiantraikany eo amin'ny endriny mandritra ny andro (na mety ho herinandro) raha vao ny doka farany anao. Ny vokatr'izany dia mety hahatonga anao hieritreritra fa ny clomiphene citrate sy ny metabolites dia tokony ho eo amin'ny rafitrao ary hahatsapa fa ela be alohan'ny hamongorana izany. Mba hahitana raha toa ka mitoetra ao amin'ny baikonao foana ny clomiphene citrate, ilaina ny mieritreritra ny famonoana ny antsasaky ny dimy ka hatramin'ny fito andro.
Ity fahavoazana dimy hatramin'ny fito andro ity Clomid ny antsasaky ny fiainana dia midika fa efa ho herinandro feno izany raha vao tapitra ny dôsina farany amin'ny fanesorana ny sanda sivifolo amin'ny clomiphene citrate dosage avy amin'ny famokarana. Raha fantatrao fa clomiphene citrate toy ny famonoana ny antsasaky ny antsasaky ny fiainana, dia ho marina ianao amin'ny fahatsiarovanao fa mbola ao amin'ny rafitrao - na dia efa herinandro hatramin'ny dôsa farany aza. Amin'ny ankapobeny dia mety haka eo anelanelan'ny fito amby roapolo andro.5 sy 38.5 androany mba hanafoanana ny citrate clomiphene avy amin'ny rafitra manontolo; Tokony ho efatra hatramin'ny enina herinandro
Ny tatitra hafa dia milaza fa ny antsasak'i Clomid dia efa ho roa herinandro (andro 14), midika izany fa ny clomiphene citrate dia mety hitazona ao amin'ny rafitra anao hatramin'ny 11 volana aorian'ny dôminanao farany. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tokony manantena ny citrate clomiphene mba hijanona ao anatin'ny iray volana sy tapany aorian'ny fitsaboana farany. Tsara homarihina fa ny clomiphene citrate dia ahitana isomera maromaro: clomiphene (~ 62%) ary zuclomiphene (~ 38%).
Ny famonoana ny antsasaky ny androm-piainan'ny clomiphene dia mifandraika amin'ny efatra ora sy fahefany, fa ny antonontonona simika loatra amin'ny toclomiphene dia maharitra ela kokoa. Ny klomiphene constituent dia nesorina tao anatin'ny herinandro maromaro, raha toa kosa ka mety hitranga amin'ny endri-panavotan'i Clomid ny toclomiphene. Ny toclomiphene dia hita ao anatin'ny plasma tsara indray mandeha iray volana amin'ny famaranana clomiphene citrate ary ny tahan'ny fitiliana dia voatatitra tamin'ny fandroahana maloto rehefa afaka herinandro sivy ambin 'ny folo
Na dia mitoetra aza ny clomiphene mandritra ny efatra na 11 hekitara raha vao tapitra ny doka farany, tsy ny mpampiasa rehetra dia afaka manafoana ny zava-mahadomelina amin'ny dingana toy izany. Ny mpampiasa sasany dia mety hamongotra haingana kokoa ny enclomiphene sy ny toomomiphene isomera (amin'ny herinandro enina), fa ny hafa tokony mbola tokony toclomiphene amin'ny fandrefesana plasma afaka herinandro enina. Ny fiovan'ny toetran'ny olona tsirairay amin'ny famonoana haingana ny clomiphene dia azo hazavaina amin'ny fari-pahaizana toy ny singa manokana, ny dosage ary ny fe-potoana fitantanana.
Ny antony manokana
Ny roa vavy dia mety hahatonga ny 50 mg clomiphene mandritra ny dimy andro misesy eo am-piandohan'ny fotoana fiakaran'ny saka. Na izany aza, mpampiasa iray dia mety hanafoana ny rongony haingana noho ny iray hafa. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny herin'ny vatan'ny tsirairay. Ho an'ireo mpampiasa sasany, ny dokotera dia afaka mijanona ho mazoto mandritra ny fotoana maharitra raha ny hafa kosa, ny fitsaboana dia hijanona ao anatin'ny fotoana fohy.
Ny génétique: Ny literatiora ara-pitsaboana dia maneho fa ny clomiphene dia mikaroka ny metabolisma ao anatiny. Na dia tsy hita taratra ao amin'ny lalànan'ny taova ao anatiny aza izy ireo, dia azo lazaina fa ny CYP2D6 (cytochrome P450 2D6) no ampiasain'ny sehatra iray.
Ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina raha tsy ny rehetra no manana ny toetrany sy ny fihodinan'ny sehatra miankina amin'ny fomba ampiasanao izany. Ohatra, raha toa ka ampiasaina am-pilaminana, na raha tratra, Clomid dia mety hampiasa mpampiasa mampidi-doza ny mampivelatra ny fiantraikany. Misy ihany anefa Clomid hafa izay mahazatra ary mety hanjavona ao anatin'ny fotoana fohy. Etsy an-danin'izany, dia mety hisy fiantraikany bebe kokoa ny vokatra hafa raha toa ianao ka mitondra dose avo kokoa noho izay omen'ny dokotera anao. Ny voka-dratsin'ny sasany amin'ireo mpampiasa Clomid dia ahitana;
Ny halatra, ny fanaintainana, ary ny tsy fahampiana
Ny vagin-dra sy ny uterine
Oviana ny Hyperstimulation Syndrome
Fampitomboana ny ovirerana
Na dia izany aza dia misy fiantraikany mahery vaika, saingy izy ireo ihany no miankina amin'ny fomba itondranao ny zava-mahadomelina. Mifanohitra amin'izany, ny rafitra nataon-dehilahy ihany koa dia zava-dehibe ny zavatra niainanao taorian'ny nanaovana ny Clomid. Ny olona sasany dia hahatsapa ny fiantraikany mahery vaika na dia mandray ny dosie prescribed na ambany aza. Izany no antony hanoroantsika mandrakariva ny mpanjifantsika mba handinika fitsaboana alohan'ny hanombohany mitondra izany zava-mahadomelina izany. Raha sendra misy tranga ianao, dia tokony hikaroka fitsaboana avy hatrany ianao;
Tokony hanamarika ihany koa ianao fa raha misy ny tsy mety, Clomid dia mety hitarika amin'ny fitondrana vohoka. Misy ny vintana avo lenta izay ahafahanao bevohoka amin'ny fampiasana ity vokatra ity, miaraka amin'ny 7% izay hahazoana kambana roa ary ny 0.5% vintana ianao dia hahazo fahatelo na didy ambony kokoa. Hendry ianao raha miresaka amin'ny dokoteranao aloha, miady hevitra momba ny loza mety hitranga, ary koa mamaritra raha mety amin'ny zana-kisoa na multiples ianao. Raha tsy vonona ny bevohoka ianao, dia tsara ny mandinika akaiky.
Alohan'ny hampiasana ny Clomid, dia ataovy izay hahazoana antoka fa tsy azonao atao na oviana na oviana ny tsiranoka. Azonao atao ny miresaka amin'ny dokotera aloha ary mamelà torohevitra momba ny fahaiza-manaonao raha mety amin'ny fampiasanao izany. Izany fomba izany, dia azonao atao ny misoroka ny mety hahatonga anao ho voan'izany. Ataovy azo antoka koa fa manaraka ny dosage nomena anao ianao.
Ho an'ny vehivavy izay mampiasa ity vokatra ity amin'ny fomba tsy mendrika ary tsy mahatsapa tsara azy io, dia maro ireo tombony mety hitranga. Ataovy azo antoka ny fandraisanao ny dokotera alohan'ny, mandritra ary aorian'ny famaranana ny dosage Clomid ho anao mba hankafy indrindra Clomid tombontsoa. Clomid dia manome tombontsoa maro ho an'ireo mpampiasa izay toy izao manaraka izao;
Sarotra mahomby - anisan'ireo fomba tena sarobidy indrindra amin'ny fitsaboana ny tsy fahampiana. Ny vidin'ny Clomid raha oharina amin'ny fepetra hafa toy ny IVF dia tsy manan-tsahala. Nanjary toy ny mpamonjy aina ho an'ny olona izay miatrika olana amin'ny tsy fahampian-tsakafo izany saingy tsy misy fitsaboana noho ny tsy fahampian'ny vola. Ny vokatry ny mpampiasa azy dia mihoatra noho ny lanjan'ny vola lany.
Medikaly am-bava - Ny fanafody am-bava dia mora ary tonga amin'ny fanaintainana kely. Izany dia tsy toy ny injections izay tokony hametrahan'ny mpampiasa ny fanjaitra rehetra manerana ny vatany, izay mety hikoropaka be. Ny Clomid dia iray amin'ireo fitsaboana vitsivitsy izay mamonjy ny vehivavy amin'ny olana toy izany.
Ny mpikarakara voalohany dia afaka mandefa izany - ny vaovao tsara dia tsy mila mitsidika manam-pahaizana momba ny fananahana ianao mba hahazoana prescription Clomid. Manatsara ny fialana izany, indrindra raha tsy fantatrao na iza na iza ny manam-pahaizana momba ny fananahana anao. Fotoana fialan-tsasatra izany, ary ny ampahany tsara indrindra dia azo antoka fa ampiasaina raha toa ka manaraka ny torolàlana azo ampiharina.
Tonga miaraka amin'ny voka-bary vitsivitsy - raha ampiasaina araka ny tokony ho izy, dia tsy misy voka-dratsy ny Clomid. Raha toa ianao ka misy, dia izy ireo ihany no malemy fa handao fotoana fohy aorian'ny tsy hampiasana intsony ny fampiasana na ny fampiasana ny vatanao amin'ny vokany. Tadidio koa ny hividy ny zava-mahadomelina avy amin'ny mpanamboatra mpamokatra na mpamatsy anao mba hahazoana antoka fa hahazo vokatra tsara ianao mba hahazoana tsaratsara kokoa amin'ny Clomid.
Ity vokatra ity dia nahazo tsikera marobe sy fanombanana avy amin'ireo izay efa nampiasa izany talohan'izay. Maro amin'ireo izay nampiasa azy no nilaza fa niaina haingana izy ireo Vokatra amin'ny Clomid, ary gaga izy ireo hoe ahoana no nanehoan'ny vokatra ny vatany. Ny ankamaroan 'ireo vehivavy dia nilaza fa tsy nahatratra ny fotoan' izy ireo izy ireo raha toa ny hafa kosa nahazo famantaranandro tsy mahazatra ary tsy afaka bevohoka, fa hatramin 'ny nahafantarany momba izany fanafody mahafinaritra izany. Ary koa, ny ankamaroan'izy ireo dia nahazo valiny tao anatin'ny telo volana taorian'ny fampiasana azy.
Ny sasany tamin'izy ireo dia nitaraina noho ny aretin'andoha, ny hafanana, ny aretim-pivalanana, ary ny boka, fa ny ankamaroan'ireo izay niaiky fa efa nilefitra tamin'ny zava-mahadomelina izy ireo ary ny fiantraikany dia mihantona avy hatrany rehefa avy nanitsy ny fampiasana azy. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'ireo mpampiasa mitaraina amin'ny fisian'ny traikefa ratsy amin'ny Clomid dia niaiky fa nampiasa ny zava-mahadomelina izy ireo raha tsy nahitana fanadihadiana ara-pitsaboana. Ara-dalàna ny famokarana fanafody mba hampisy fihetseham-po sy fanehoan-kevitra avy amin'ny mpampiasa samihafa. Amin'ny ankapobeny, Clomid dia fanafody tena tsara amin'ny fitsaboana trangam-pahalemana eo amin'ny vehivavy. Ny ampahany tsara dia ny hoe tsy voatery handalo fitsaboana tsy tapaka ianao satria io no zava-mahadomelina. Manomboka mitrandraka ny vokatra ao anatin'ny fotoana fohy ihany koa ny mpampiasa sasany mitatitra bevohoka aorian'ny telo volana monja.
Ny toro-làlana farany amin'ny Testosterone decanoate ho an'ny Bodybuilding(Misokatra amin'ny tranokala vaovao ianao)
Ankehitriny, ny dokotera efa nanome anao ny ordinatera, mahazatra ny mahatsiaro ho mientanentana sy tototry ny fanandramana. Izany dia mety hitarika anao hividy izany amin'ny mpivarotra voalohany izay tonga amin'ny lalanao, ary fahadisoana lehibe izany. Raha mikasa hividy Clomid ianao dia mila mitandrina tsara mba hahazoana antoka fa hahazo azy avy amin'ny azo itokisana ianao Clomid mpamatsy ary tsy miditra amin'ny fandrika ataon'ireo mpampihorohoro ianao. Nisy fangatahana nitombo ho an'ity vokatra ity, izay nitarika ny fitomboan'ny isan'ny mpamatsy entana sy ny fitakiana hivarotra izany. Raha tsy mitandrina tsara ianao, dia hiafara amin'ny vola mandany vola amin'ny zavatra tsy afaka hanome anao ny vokatra izay tadiavinao. Azonao atao koa Buy Clomid powder izay tsy azo antoka ho an'ny fanjifana, izay hitondra fiantraikany ratsy sy fanaintainana ratsy kokoa noho izay efa ataonao.
Makà fotoana ary tadiavo ny Clomid mpamatsy azonao itokisana. Ny fividianana Clomid an-tserasera dia manome anao ny fitaintainana fa mila mahazo ny tsara ianao. Jereo ny fanadihadihana an-tserasera ary jereo ny hafa izay nividy ny vokatra avy amin'io mpivarotra io dia milaza momba ny vokatra. Azonao atao koa ny manome toro-hevitra avy amin'ny namana iray na havanao izay efa fantatrao efa nampiasa ity vokatra ity aloha ary mamela azy ireo hanondro anao amin'ny mpamatsy azy manokana. Sarobidy ihany koa ny fandaniana rehefa mikaroka Clomid for sale raha tsy ny drafitry ny fiantohana no manarona ny vidiny. Tsy tokony hamela ny tenanao ho voaro ianao, fa kosa, hanao fikarohana, hahatakatra ny vidin'ny tsena ary mandehana amin'ny mpivarotra amin'ny vidiny mora indrindra.
Ny fanafody dia zavatra manan-danja, ary tokony hiatrika izany amin'ny faratampony. Aza maika ny fampiroboroboana voalohany tonga amin'ny lalanao, fa kosa mitady ny kalitaony. Ny vaovao tsara dia ny amin'izao fotoana izao ny mpamatsy Clomid tsara indrindra eto amin'ny faritra. Afaka manao ny baiko mora foana amin'ny alàlan'ny findainao ianao, ary hamotsotra azy eo am-baravaranay. Ny vidinay dia tena mahay mandanjalanja, ary afaka manao buy Clomid in bulk avy amin'ny tranonkala fifaneraserana. Omeo antso izahay isaky ny manana fanontaniana na mila fanampiana amin'ny fanaovana ny baiko. Ny rindran-tsolika dia misokatra 24 / 7.
Clomid amin'ny fikarakarana tsy fahampiana amin'ny vehivavy - (Famintinana)
Ny Clomid dia voaporofo fa tena mahomby raha jerena ny fitsaboana ny fahaverezan-janaka eo amin'ny vehivavy. Izy io dia miasa amin'ny fanamafisana ny vatany fa ambany ny ambaratonga estrogen ao aminy noho ny tena izy marina, izay ho setrin'ny pitipoteny dia hampitombo ny haavon'ny fôlônika mihandrona. Izany dia manandratra ny ovaire mba hamokarana ovale na ova, ary ny mpampiasa dia afaka bevohoka mandritra ny ovulation. Fitsipika mivantana, ary ny zava-mahadomelina dia niasa ho an'ny olona marobe izay nanam-potoana hitadiavana ny Clomid (50-41-9) ary nampiasa izany araka ny tokony ho izy. Raha toa ka misy olana ara-boajanahary iainanao, dia miezaha hividy an'io vokatra io ary ankafizo ny valiny.
Na izany aza, ataovy azo antoka ny fandraisanao ny dokotera amin'ny dingana manontolo amin'ny dosage hahazoana vokatra faran'izay betsaka. Aza misalasala mampahafantatra ny medikao raha mahatsapa fihenan-tsakafo hafa ianao na raha tsy mahazatra anao ny zava-mahadomelina. Anisan'izany ny fiantsonao, raha toa ianao ka mahatsapa fihenjanana mahatsiravina vao miharatsy ny toe-javatra.
Joham, AE, Teede, HJ, Ranasinha, S., Zoungas, S., & Boyle, J. (2015). Ny herisetra amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fampiasana ny fiterahana amin'ny fiterahana amin'ny vehivavy miaraka amin'ny aretin'ny ovale polyarystika: fampahalalana avy amin'ny fianarana ambaratonga ankapobeny. Diary momba ny fahasalaman'ny vehivavy, 24(4), 299-307.
Berger, MH, Messore, M., Pastuszak, AW, & Ramasamy, R. (2016). Fikambanana eo anelanelan'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fanaovana tsinontsinona ny lahy sy ny vavy. Fitsaboana ara-pananahana, 4(4), 353-365.